Puntland "Ra'isal Wasaaraha ayaa u wici kara qabashada shirka Golaha Wadatashiga Qaranka" - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Puntland “Ra’isal Wasaaraha ayaa u wici kara qabashada shirka Golaha Wadatashiga Qaranka”
Puntland “Ra’isal Wasaaraha ayaa u wici kara qabashada shirka Golaha Wadatashiga Qaranka”
Maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka dhawaan lagu waddo in ay yeeshaan Madaxda maamulada ee ka dhici doonnaa magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland, kaasoo looga hadlaayo xaaladda Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad ayaa sheegay in shirkaasi uusan aheyn mid looga hadlaayo Arrimaha doorashooyinka islamarkaana madaxda maamulada ay ka shiri doonaan iskaashiga dhexdooda.
Waxaa uu tilmaamay in shirka Arrimaha doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaran ay ugu dambeeyaan Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo u yeeri kara madaxda maamuldii xilligii u baahdo.
“Ra’isal Wasaaraha ayaa u wici kara qabashada shirka Golaha Wadatashiga Qaranka, Kan Dawlad Goboleedyadu waa ka duwan yahay waana Dastuuri” ayuu ku sheegay wareysi uu siiyay Radiodaljir ee Garowe.
Waxaa uu caddeeyay in ay garab taagan yihiin Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed xuseen Rooble oo ah hoggaamiyaha guud ee Arrimaha doorashooyinka.
Previous articleBeesha Caalamka oo baaq u dirtay Farmaajo iyo Rooble
Next articleDowladda Mareykanka oo war kasoo saartay khilaafka Farmaajo iyo Rooble